စစ်သည်တော်ဝိဉာဉ်: + ဂုဏ်ယူပါသည် သူငယ်ချင်း
Posted by Army Soul at 8:35 PM
ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်ကျန်းမာမှ ကျန်တဲ့သူတွေဆေးကုနိုင်မယ်။
သစ်တစ်ပင်ကောင်း ငှက်တစ်သောင်းနားတဲ့။ အဲဒိသစ်ပင် လဲသွားရင် ဒီငှက်တစ်သောင်းဘယ်မှာနားမလဲ။
ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဗျာ .. လေးစားပါတယ် ..
စစ်သားတွေမှာလည်း တော်တော်ချစ်တက်ကြပါပေတယ်.... ချစ်သူကို ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးနိုင်စွမ်းလည်း ရှိတက်ကြပါတယ်..
ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်က အနားလည်ဆုံး ဖြစ်နေတာကိုဗျ... အမြန်ဆုံးနေကောင်းပါစေဗျာ
လူနာတွေအတွက် ပိုကြည့်တတ်တဲ့ ဆရာဝန်လေးကို လေးစားပါတယ်...
ဖတ်ပြီးရင်ထဲ မောသွားတယ်.. ဦးဦးက အရေးအသားကောင်းတော့ ဟတ်ဒ်ထိသွားတယ်... :(
ကောင်း ပါ့ ဘရာသာရာ... ။ စစ်သားလည်းနှလုံးသားနဲ့ 
ကိုယ်ချင်း စာစိတ်နဲ့...။
ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ စိတ်ရှိ ပါတယ်...။
ဪ ..ဇဗ္ဗူ တလူ ဤလိုသူမျိုးလည်း ဒီခေတ်အခါမှာ ရှိပါသေးရဲ့ နော် ။ မှတ်သားလောက်ပါပေတယ် ။လေးစားပါတယ် ။ မောင်မင်းကြီးသား အမြန်ဆုံး ကျန်းမာပါစေ ။
www.4everarmy.co.cc is very informative. The article is very professionally written. I enjoy reading www.4everarmy.co.cc every day.